सरकारी गाडीमा १७ बर्षीया कि’शोरी लिएर सरर, प्रहरीले होटलमा नि’र्व’स्त्र भेटेपछि थ’रर्र ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारसरकारी गाडीमा १७ बर्षीया कि’शोरी लिएर सरर, प्रहरीले होटलमा नि’र्व’स्त्र भेटेपछि थ’रर्र !
सरकारी गाडीमा १७ बर्षीया कि’शोरी लिएर सरर, प्रहरीले होटलमा नि’र्व’स्त्र भेटेपछि थ’रर्र !
काठमाडौं– कि’शोरीसँग होटलमा र’ङ्गे’हात पक्राउ गरिएका सुनसरी भो’क्राहा–नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारी गाडीको दु’रुपयोग गरेको खु’लेको छ। यौ’न’ज’न्य क्रि’याकलाप गरिरहेको अवस्था यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
धरान–१३ भे’डेटार जाने सडक किनारमा रहेको डु’कु हो’टेलबाट यादवलाई यौ’न’ज’न्य काम गरिसकेपछि नि’र्व’स्त्र रहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको इ’ला’का प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी ना’यब उपरीक्षक (डि’एसपी) ज्ञा’नेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
त’त्कालीन सं’घीय समाजवादी नेपालबाट नि’र्वाचित यादवसँगै होटलमा भे’टिएकी कि’शोरीलाई सरकारी गा’डीले होटलमा छा’डेपछि फ’र्किएको प्रहरी अ’नुसन्धानमा खु’लेको छ। कि’शोरीले यौ’न’ज’न्य क्रि’या’क’ला’प न’गरौं भन्दा ज’ब’र’ज’स्ती गरेको ब’यान दिएकी छन्।
या’दववि’रुद्ध ज’ब’र’ज’स्ती क’र’णी मु’द्दाको द’र्ता भएको डिएसपी बस्नेतले बताए। प्रहरीले यस विषयमा थ’प अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बुधबार रा’मनवमी भएकाले सरकारी वि’दा थियो। वि’दाको मौ’का’मा अध्यक्ष यादवले जा’गिर ल’गाइदि’ने प्र’लोभनमा इ’टहरीकी कि’शोरीलाई फोन गरे।
फोनमै उनीहरुबीच धरान जाने स’हमति भयो। भो’क्राहा न’रसिंहदेखि इटहरी आउन गाडीमा करिब ४५ मिनेट लाग्छ। अध्यक्ष या’दवले जा’गिर लगाइदिने प्र’लोभ’नमा ती यु’वतीलाई फोन गरेर गाउँपालिका का’र्यालयबाट नि’स्किएका बताइएको छ। अध्यक्ष यादव बुधबार दिउँसो सरकारी गा’डीमा होटेल आएको थाहा पाएपछि स्था’नीयले प्रहरीलाई जा’नकारी दिएका थिए।
प्रहरी पुग्दा समेत अध्यक्ष यादव नि’र्व’स्त्र अवस्थामा थिए। होटेलमा अध्यक्ष यादवले कि’शो’री’को नाम सविना र उनको नाम सलिन शाह टि’पाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खु’लेको छ। ‘जा’गि’र ल’गाइदि’ने भनेर धरान घु’म्न जा’औं भनी फोन गर्नुभयो, अनि होटलमा ल’गेर न’गरौं भन्दा भन्दै ज’ब’र’ज’स्ती ग’र्नुभयो’, कि’शो’री’ले प्रहरीलाई दिएको ब’या’नमा भ’नेकी छन्।